Melomania Kubata, mahedhifoni akasununguka kubva kuCambridge Audio | Gadget nhau
Miguel Hernandez | 01/01/2021 18:00 | Yakagadziridzwa ku 23/12/2020 00:28 | General, Reviews
Pane dzimwe nguva isu takatomboongorora chigadzirwa kubva kuCambridge Audio, inozivikanwa yemhando yakasimba kurira iyo iri muUnited Kingdom uye inozivikanwa zvakanyanya nehunhu hwezvigadzirwa zvayo. Ino nguva tiri kuenda nechakavambwa chigadzirwa chatisingade kupotsa, iyo Melomania Kubata.
Cambridge Audio's ichangoburwa Yechokwadi Wireless (TWS) mahedhifoni abaya pamusika uye isu takavaedza. Isu tinokuudza kwedu kwakadzika kuongorora kweiyo nyowani Cambridge Audio Melomania Bata nezvose zvaro zvine mutsindo maficha. Pasina mubvunzo, kambani yeBritish yakamboitazve basa remhando yepamusoro.
1 Dhizaini: Bold uye mhando
2 Unyanzvi maficha: Hi-Fi centric
3 Unhu hwemumhanzi: Ongororo yedu
4 Melomania application, yakawedzera kukosha
5 Kuzvimiririra uye ruzivo rwevashandisi
Dhizaini: Bold uye mhando
Unogona kuvafarira zvakanyanya kana kuti unovafarira zvishoma, asi iwe unotoziva kuti mukuwongorora kwangu ndinoda kuombera mabhureki anozvisiya kure nekufinha kana muyero uye kusarudza kwekushinga kana dhizaini. Ndozvazviri nema Melomania Touch, iyo nyowani yekuteerera yeCambridge mahedhifoni.
Wakavada here? Unogona kuzvitenga pamutengo wakanakisa pa IYI BHUKU.
Zvakanaka kambani yeBritish anozviti akaongorora nzeve dzakatenderedza mazana matatu uye chakasarudzika chave ichi chinoshamisa uye chisina kujairika dhizaini. Kunze tinowana purasitiki yakakwenenzverwa inotaridzika kunge yakanaka, machira emabhaidhi uye mapads ayo.
Ini pachangu soy yeavo vane matambudziko nema-nzeve mahedhifoni nekuti ini ndinodonhedza ese mamodheru. Izvi hazviitike kwandiri neMelomania Touch, vane silicone "fini" inoita kuti mahedhifoni asafambe uye akakodzera mhando dzese dzezviitiko. Iyo hombe nhamba yemapads inosanganisirwa nechigadzirwa inoita kuti zvinyanye kusakwanisika kuti usazvichinjise kune zvaunofarira.
Vipimo Yekuchaja kesi: 30 x 72 x 44mm
Vipimo Mahedhifoni: Kudzika 23 x Kureba (nzeve isina chirauro) 24 mm
Weight Mhosva: 55,6 gramu
Weight Headphone: 5,9 gramu imwe neimwe
Inobata kutaura zviri pachena nezvevhavha. Isu tinowana chaiyo premium yekuchaja kesi, yakaitwa yekuteedzera dehwe kune yekunze, ine mashanu bhatiri chiratidzo LEDs uye USB-C chiteshi kumashure. Bhokisi racho rine chimiro chesaizi uye rakaenzana saizi uye rakasununguka kutakura, raiita kunge rakabudirira uye chokwadi ndechekuti inodarika mhando.
Chekupedzisira, cherekedza kuti isu tinogona kutenga mahedhifoni mu chena uye nhema, zvinoenderana nezvatinofarira uye zvatinofarira.
Unyanzvi maficha: Hi-Fi centric
Ngatitaurei titaure manhamba uye titange neayo 32-bit mbiri-musimboti processor uye imwechete-musimboti odhiyo diki. Qualcomm QCC3020 Kalimba 120MHz DSP, nenzira iyi uye kuburikidza Makaralı 5.0 Kirasi 2 isu tinowana yepamusoro-soro kurira kwekufambisa kugona, kunyange hazvo zvakawanda zvine chekuita nezvose izvi iyo macodecs: aptX ™, AAC uye SBC ine mafaera A2DP, AVRCP, HSP, HFP.
Iye zvino tava kuenda takananga kune madhiraivha, iwo madiki maspika mukati memusoro mahedhifoni anoshandura zvakanyanya kugadzirisa kuita mhando yemhando Isu tine inesimba system ine 7 mm graphene-yakasimbiswa diaphragm, mhedzisiro iyi inotevera data.
Kakawanda: 20 Hz - 20 kHz
Harmonic Kusanganisa: <0,04% pa1 kHz 1 mW
Padanho rehunyanzvi, isuwo tinofanirwa kutaura mamaikorofoni, uye isu tine maviri maMEMS zvishandiso zvine cVc ruzha kudzima (zvakare kubva kuQualcomm) uye nekunzwa kwe100 db SPL pa1 kHz.
Isu tine mukati mekesi nebhatiri re500 chete maRah uye kuti ichabhadharisa pa5V kuburikidza neyakaisirwa USB-C yekuchaja tambo, kwete iyo magetsi adapter. Izvi zvinoda maminetsi zana nemakumi maviri ekubhadhara zvizere kubva pa120% kusvika pa0%.
Unhu hwemumhanzi: Ongororo yedu
Watoona nhamba zhinji dzinokuudza zvisingaite kunze kwekunge uine rumwe ruzivo, saka ngatiendei kunoongorora kwedu kwepasirese, chii chave chiitiko chedu kuvashandisa, kunyanya tichifunga kuti pano taedza zvinenge zvese yepamusoro magumo TWS mahedhifoni izvo zvinowanikwa mumusika.
Pasi: Kutendeseka, kana mahedhifoni aine yakaderera chimiro, isu tinowanzo kutarisana nechigadzirwa chebhizimusi icho chinoda kuvhara kumwe kusakwana. Izvi hazviitike neMelomania Touch, chaive chinhu chekutarisira tichifunga kuti ivo chigadzirwa cheCambridge Audio. Nekudaro, iyo chokwadi chekuti havauye seti ine mabass akakurumbira hazvireve kuti ivo havagone kutaridzika zvakanaka mune icho chinhu, isu tichataura nezve izvi gare gare. Iwo mabass ndipo paanofanirwa kuve uye anotibvumira kuti tinzwe zvimwe zvese zvirimo. Zviripachena, kana iwe uri kufunga nezvekuteerera chete kune yekutengesa reggaeton, inogona kunge isiri yako chigadzirwa.
Midhiya: Semazuva ese, isu tinoita muyedzo wedonje nekamwe kaQueen, Robe uye Artic Monkeys. Mashoma mahedhifoni anogona kupusa uyu mumhanzi uye isu tinowana musiyano wakakodzera wezviridzwa.
Kazhinji, isu hatina kurasikirwa kwemhando yepamusoro, hatina mhirizhonga uye mazwi anonzwika zvakanaka. Miedzo yedu yakaitwa kuburikidza neHuawei P40 Pro ine aptX uye iPhone kuburikidza neAAC.
Melomania application, yakawedzera kukosha
Isu tanga tichiedza kunyorera Melomania muchikamu che beta. Mhedzisiro yacho yanga yakasarudzika, iko kunyorera kuchatibvumidza zvese izvi. Unogona kuwana iko kunyorera kweese mairi iOS uye Android (panguva ino yekunyora haisati yaburitswa zviri pamutemo).
Gadzira tsika profiles
Activate / deactivate kubata mabasa
Gonesa / kudzima pachena nzira
Hapana mubvunzo zvakakosha kuti ugone kugamuchira zvigadziriso (zviviri patanga tichivaedza) uye pamusoro pazvose kugadzirisa mhando yemodhiyo pamahedhifoni ezinga iri, bravo kuCambridge Audio.
Kuzvimiririra uye ruzivo rwevashandisi
Tinotanga nekuzvimiririra, Makumi makumi mashanu emaawa kana tichifunga yavo kusvika kuma50 anoteedzera maawa (chete kuburikidza neA9DP chimiro) uye vakasara makumi mana vanopihwa nebhokisi. Ichokwadi ndechekuti tinowana anenge maawa manomwe ekurira kurira muhunhu hwepamusoro uye nemabatirwo akajeka akaremara, angangoita maawa makumi matatu nemakumi matatu nemakumi mana akazara muzvikamu zvakakwirira.
Nekushandisa kwenguva refu vakasununguka, iKunyangwe isu tikamisa iyo Transparency Mode, iyo inogamuchira manzwi senge maaramu kana manzwi kuburikidza nemakrofoni kuti uberekane zvakajeka, uye ndeyekuti kuve-munzeve mahedhifoni nekubata kwakasarudzika, isu tine yekungoregedza odhiyo kurasa zvakakwana kuti tinakirwe nemumhanzi uye kuti Transparency Mode inogona kudikanwa.
Zvakaitika kwandiri neMelomania Touch zvave zvakanaka, isu takatarisana zvakare nechigadzirwa cheprimiyamu kubva kuCambridge Audio, izvi zvinoratidzwa zvakare mumutengo wayo, kubva pa139 euros Unogona kuzvitenga zvese zviri zviviri pamutemo webhusaiti uye kuburikidza IYI BHUKU.
Yakatumirwa pa: January 1 we2021
Kugadziridza kwekupedzisira: December 23 we2020
Hunhu hwezvinhu uye dhizaini, inzwa premium
Yakakwira mhando mhando
Kusarudzika kuburikidza neApp yako
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Reviews » Melomania Bata, mahedhifoni akasununguka kubva kuCambridge Audio